I-fungus emaphungeni: izibangela, iimpawu kunye nonyango
Ngokuqhelekileyo, izifo zengqungqelo zaqala "ukuphazamisa" ubomi bethu, abantu abaninzi beqala ukucela uncedo oogqirha ukuba basuse zonke iintlobo "zabaqashi" bomzimba wethu. Iinyawo ezinyawo, iipilisi zesikhonkwane, isikhumba - zonke ezo ndawo zomzimba womntu zithandana nezifo zenyama. Kukho izifo ezifayo ezichaphazela iindawo ezithile zomzimba nabantu. Ngokomzekelo, i-thrush yiyona nto isifo se-fungal yezilwanyana, kwaye ngamanye amaxesha abantwana banemiphunga emlonyeni. Uphulo lwefungi luvame ukulibaziseka kwiinyanga eziliqela, kodwa kunjalo, alukho nzima kakhulu. Kungekudala, izifo zamaphaphu ezithengayo ziye zaxhaphaka. Ziyingozi kakhulu kwaye ziyingozi kakhulu umntu, kuba umntu osebenzayo, ophilileyo wenza ukuba lesi sifo sibe sisidalwa esinesidima, esibi, esingakwazi ukwenza nantoni ngaphandle koncedo. Ukuba awuqapheli okanye uqale lesi sifo, umntu uya kupheka emva kweeveki ezimbalwa aze aye ethuneni. Makhe sijonge iimpawu kunye nokunyangwa kwezifo zamaphaphu.
Iimpawu zefungus kwimiphunga
Ukuxhalabisa oogqirha inani lezifo ezinje landa ngonyaka. Iqela elijongene nobungozi libandakanya iindidi ezilandelayo zabemi: abantu abanegciwane lesifo sengculazi, okanye i-AIDS, izigulane zomhlaza, abantu abanomdlavuza, kunye nabantu abaye basebenzisa i-antibiotic agents.
Izifo zefungal zibangele iifungulu ezilula kakhulu. Umzimba wefungus uqukethe i-hyphae, i-branching filaments. Kwonyango kunye namanyathelo okukhusela, kufuneka kukhunjulwe ukuba ingqungquthela izaliswa yi-spores.
Njengayezinye izifo zamaphaphu, isibonakaliso sokuqala sesifo sefungal sikhwehlela. Iimpawu eziqhelekileyo zintlungu kwimiphunga kunye ne-bronchi, ubuninzi be-sputum. Kukho ukuhla kwe-immunity, ubuthathaka, ukulala, ukunciphisa ukusebenza kwemoto. Isibonakaliso sezifo zamaphaphu sinokushisa komzimba ophezulu kakhulu, okungeke kukhonswe phantsi ngaphandle kokufumanisa umthombo wesifo. Kodwa musa ukuthembela kuphela ekukhunjini kunye nobushushu - ezi zimpawu zenzeka ngezifo ezahlukahlukeneyo, kubandakanywa nokungabalulekiyo.
Izindlela zokonyango kwezifo zamaphaphu
Ukufumana isifo sefungal kuphela kunokuhlolisiswa kwi-device. Xa indawo yomphunga ibonakala, kubonakala ukuba izithunzi zemilo ejikeleziweyo zenziwa. Utyando luyalelwe emva kokuqulunqa uhlobo lwefungum e-sputum.
Ugulo lwezifo ezifubeni luvame ukuqhutyelwa esibhedlele ngamachiza omzimba, kodwa ngamanye amaxesha uncedo olungxamisekileyo lokungenelela lufuneka. Kwiimeko ezinjalo, i-akhawunti ihamba imizuzu, kwaye ukulibaziseka okuncinci kunokulahleka ubomi bomntu.
Kwimpilo akuyimfuneko ukuba ihlawulwe kuphela ngemveliso yonyango - kuyimfuneko ukusebenzisa kwakhona unyango lwe-radial. Ukunyanga kwamayeza kunokutshabalalisa iimbungulu kwindawo yomphunga kunye ne-bronchi.
Indlela yokuphilisa i-fungus kwimiphumo yomntu wamaphaphu
Ukunyanga kwemiphunga, umntu unokusebenzisa iindlela zamachiza endabuko. Ngokomzekelo, isiraphu kunye nomhluzi ukusuka kudalaberry ukunciphisa ukusebenza kwefungi. I-Thyme, i-aspen bark, i-adonis, i-eucalyptus, i-calendula ithathwa njengamayeza. Iziqhamo kunye neoli ephuma kulezi zityalo zivelisa umphumo omuhle kunyango lwezifo zenyama. Ukuphucula ukusebenza kakuhle, kucetyiswa ukuba usebenzise iqoqo kwiimveliso ezininzi.
Indlela efanelekileyo kakhulu yokunyanga izifo zamaphaphu kunye nesosi. Thatha i-honey pine ubalulekile ngaphambi kokutya. Musa ukulibala ukuhlamba ngamanzi abilayo afudumele ngobuninzi.
Ukugqithisa kakuhle, okulungiselelwe ukusebenzisa israsi. Ukunyanzelisa kufuneka kusetshenziswe kwindawo yomphunga, kunye neepardard plasters. Isalathisi sidinga ukuxutywa, sisongwe kwisirya kwaye sishushu. Ukutya kunye nomsila kunenzuzo. Ukuba awuyazi indlela yokulungisa izitya nge-radish, ungayifaka ijusi yakhe kwaye uyixube kunye ne-vodka kunye nobusi busika. Eli phephelo ngumbulali wefungi, kodwa ayinabi ngaphezu kweetaspoon ngosuku.
Nasiphi na isifo somphunga esibangelwa iifungi singaphiliswa ngama-blackberries. Liyonyango jikelele kwiimfuyo zemiphunga. I-Blackberry isusa i-phlegm kwimipuphu. Ungasebenzisa zombini amaqabunga kunye namajikijolo ukuze itiye okanye umhluzi.
Ukuxhatshazwa kwe-fungal lung isifo kuncedwa yi-plant ye-aloe eneminyaka emihlanu ubudala. Ukuxuthwa kulungiswe ngokuxuba kunye ne-dessert yangempela Cahors, i-honey or lime honey, i-fatger fat. Ukuxhamla kuphucula ukuphucula isigxina somguli ngesifo se-lung fungal, kukhawuleza ukubuyisela. Thatha le chiza nge tea, ngaphambi kokulala. Ukuba awuthathi iwayini elibomvu, unokuthatha indawo yeCahors nge-cognac.
Ukuhluthwa kuya kunceda ukunqanda ukukhwehlela. Kule njongo, izityalo ezilandelayo zingasondela: i-mallow, i-thyme, umama kunye nomama wesibini, i-fennel, i-chamomile. Ukumiswa kwezi zityalo kusebenza kakuhle ekunyangeni izifo zemiphunga ezibangelwa iifungi. Ezi zibophelelo zidla ngokugqithiswa ngabagqirha.
Ngokuqhelekileyo izigulana zifuna ukulawulwa rhoqo kwabasebenzi bezonyango abafanelekileyo, ngoko unyango lwezifo ezibangelwa yi-fungi luyenziwa esibhedlele. Izifo zamaphaphu ezifayilini azixeli, kwaye isiguli ngasiphi na ixesha sinokufuna unyango lwangonyango, kungenelelo lokungenelela.
Iindlela zokupheka ezininzi zonyango lonyango luncedo, kodwa kuphela ukuba ugqirha uye wafumanisa kakuhle. Ukunyangwa kwesifo esingekhoyo kuya kubangela ukuba akukho nto ilungileyo. Ithemba lokuba isifo siya kuhamba ngokwaso asiyi kulungiswa. Kulula kwaye kukhuselekile ukunyanga kwesi sifo ekuqaleni kwento yaso, kuba unyango ngamnye lunemiphumo emibi. Isigulane, esiphendule ngexesha lokuncedisa, uya kuzigcina esivela kwinani elikhulu leengxaki. Ingozi enkulu yezifo zefungal ifihliwe kwiimeko ezilandelayo - izifo ze-oncological. Kwaye zisezinyathelo zokugqibela, njengoko wonke umntu uyazi, akanakuphilisa.
Iintlobo kunye nokusetyenziswa kwe-mullein kumayeza omntu
Ukukhawuleza ukucoca amazinyo
Ingqibelelo ifa okanye isizathu kwizenzo zethu?
Ukulondeka kukuba intsingiselo yobomi ininzi lethu
Ikhukhi yeeshukela zeCitrus
Shaurma kunye nenkukhu